Wasaaradda cadaaladda iyo culamo Aw-diinka gobolka Nugaal oo baaq-nabadeed kasoo saaray colaadda gobolka Bari. – Radio Daljir
Juunyo 23, 2011 12:00 b 0
Garowe, June 23- Wasaaradda cadaaladda , diinta iyo Aw-qaafta Puntland iyo culimo Aw-diinka gobolka Nugaal ayaa kulan ku yeesheen xarunta wasaaradda cadaaladda ee magaalada Garoowe, uga hadlay xaaladda colaadeed ee deegaanno ka mid ah gobolka Bari, iyagoo soo saaray baaq-nabadeed.
Intii uu socday kulankaasi ku aaddanaa colaadda Kob-dhaxaad waxaa siweyn looga falan-qooday cawaaqib guud eek a dhalankara sii socoshada fidnadaasi iyo hababka ugu wanaagsan ee wadajir ahaan dawladda iyo bulshadu u damin karaan sii faafidda xurguftaasi colaadeed.
Mas?uuliyiinta wasaaradda caddaaladda iyo culimadii kulankaasi ka qayb-galay waxay gaba-gabadoodii shirkaasi ka soo saareen baaq-nabadeed oo miisaanleh oo ku qotamay joojinta dhibaatada colaadeed kaasoo labada beelood looga dalbanayey in ay u hoggaansamaan, hor-istaaganna dhiig kale oo data.
Wasiirka caddaalladda dawladda Puntland Cabdikhaliif Ajaayo oo hadal kooban ka jeediyey kulanka baaqa-nabadeed laga soo saaray ayaa ku dheeraaday dhibaatooyinka laga dhaxlo aakhiro iyo adduunba colaadda iyo dilalka xaq-darrada ah, isagoo dhinaca kalena tilmaamay haddii aan hadda loo guntan daminta xiisaddaasi in ay sii faafikarto ayna horseedi-karto amniga oo faraha ka baxa.
Sh. Cabdiqaadir Nuur Faarax oo isna ka mid ahaa culamadii shirkaasi ka qayb-galay ayaa isna si weyn u faaqiday diinta islaamka iyo sida ay u xaaraantimaysa dhiigga dadka muslimiinta ah, waxaana uu sheegay dawladda Puntland in loga fadhiyo dawr lamina illaawaan ah in ay ka ciyaarto soo afjaridda xiisaddaasi colaadeed.
Baaqaan nabadeed ee culimada iyo wasaaradda caddaaladda ayaa yimid kaddib markii labo maalmood ka hor tuulada Kob-dhaxaad lagu dilay afar nin qof kale oo dumar ahaydna lagu dhaawacay, taasoo salka ku haysay aano qabiil oo muddo dhex-taallay beelo ood-wadaag ah oo dega deegaanno ka mid ah gobolka Bari ee Puntland.
Cabdiweli Maxamed Sheekh,
Dadaallo ku saabsan xal u helidda xurguf-colaadeeddii Kob-dhaxaad oo ka socotay gobolka Bari.